Ahoana ny fandrefesan'ny Apple Watch ny fitepon'ny fonao | Vaovao IPhone
Raha vantany vao manaraka ny vaovao momba ny Apple Watch ianao dia azo antoka fa ho fantatrao ny iray amin'ireo mampiavaka azy indrindra: ny sensor amin'ny tahan'ny fo. Ny fiambenana Apple dia afaka milaza aminao ny faharetan'ny fitempon'ny fonao. Tsy vao ela akory izay ny endri-javatra natokana ho an'ny fitaovana lafo vidy indrindra fa efa nihena tsikelikely ary amin'izao fotoana izao dia tsy misy smartwatch na fitaovana manisa isa ny sira izay tsy mampiditra azy. Ahoana ny fandrefesan'ny Apple Watch ny tahan'ny fony ary ampiasaina amin'ny inona izany data izany? Manazava antsika amintsika i Apple.
2 Isaky ny folo minitra
3 Fatra fandrefesana azo itokisana nefa misy tohiny
Ny teknika ahafahan'ny Apple Watch hahalala ny taha mahamety ny fitepon'ny fontsika dia antsoina hoe "photoplethysmography." Tsy misy afa-tsy ny fandefasana jiro maitso mankany amin'ny hoditsika sy ny fahalalana izay tototra. Izany no ilàna ireo sensor efatra ao amin'ny faran'ny famantaranandro. Inona no ifandraisan'ny jiro maitso amin'ny fitepon'ny fontsika? Mena ny ra, midika izany fa taratry ny jiro mena (izany no ahitantsika an'io loko io) ary mitroka hazavana maitso. Rehefa mitempo ny fo dia betsaka ny ra mandalo ny vatantsika, ka mandray jiro maitso bebe kokoa izy. Amin'ny fiparitahana zato heny isan-tsegondra dia azo atao ny mahafantatra ny tahan'ny fony. Araka ny filazan'ny Apple, mampiasa hazavana infrared koa izy io mba hanisana azy.
Isaky ny folo minitra
Ary inona no ataon'i Apple amin'ity fampahalalana ity? Apple Watch dia mandrefy ny tahan'ny fitempon'ny fonao isaky ny folo minitra. Amin'ity fampahalalana ity dia fantatrao tsara kokoa ny kaloria entinao mandritra ny andro. Ankoatr'izay, mandritra ny fampihetseham-batana dia isaina tsy tapaka izy io ary asehony amin'ny efijery famantaranandro. Raha tsy manao fanatanjahan-tena dia azonao atao koa ny manamarina ny tahan'ny fitempon'ny fonao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fampiasana ny safidy "glances" (topy maso) amin'ny famantarananao.
Fatra fandrefesana azo itokisana nefa misy tohiny
Ity fomba fandrefesana ny tahan'ny fo ity dia azo itokisana rehefa tsara indrindra ny fepetra anaovana azy. Ohatra, raha tsy mangatsiaka be izy, ny rà mandalo ny hoditsika dia kely lavitra noho ny rehefa mafana, izay mety hisy fiatraikany amin'io fandrefesana io. Hisy ihany koa ny olana amin'ny fanazaran-tena izay tsy ara-dalàna sy tampoka ny fihetsiky ny sandrintsika (ady totohondry, tenisy, alika ... Izany dia Izany no antony ampiasain'ny matihanina amin'ny tarika manodidina ny tratra hifehezana ny fitepon'ny fony, fomba tsy mahazo aina kokoa izay mila kojakoja hafa fa azo atokisana kokoa. Apple aza dia manondro fa ireo tarika ireo dia mifanaraka amin'ny Apple Watch raha toa ka manana fifandraisana Bluetooth izy ireo.
Mba hahazoana vokatra tsara kokoa Nanoro hevitra i Apple ny hanamboarana ny famataran-tànana amin'ny hato-tanana. Tsy mila tery tery loatra izy io, fa mila mikatona mba hifandray mivantana amin'ny hoditra ny sensor. Ampirisihina ihany koa isika mba tsy hampiasa izany amin'ny tanantsika "mahasoa indrindra", izany hoe, raha tànana ankavanana isika dia mitafy azy amin'ny tanana ankavia ary ny mifamadika amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fandrefesan'ny Apple Watch ny tahan'ny fitempon'ny fonao?